Umncedisi kaGoogle: Iindaba eziboniswe kuGoogle I / O 2018 | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Uhlelo olutsha lweGoogle I / O 2018 sele iqalile, ke sifumana iindaba ezininzi eziza kwiimveliso zikaGoogle. Sele sizibonile zonke iindaba eziza kusetyenziselwa iifoto, ezithi ungafunda apha. Ngoku, lithuba lesinye sezona zicelo zibalulekileyo zenkampani. Kungenzeka njani ukuba kungenjalo, Sithetha ngoMncedisi kaGoogle.
Umncedisi ohlakaniphile uye waba yinxalenye ebalulekileyo yesicwangciso senkampani. Into ebonakaliswa kukwanda kokubaluleka kwayo. Singakubona oku kwi imisebenzi emininzi emitsha eza kufakwa nguMncedisi kaGoogle.
Kungenxa yokuba ngolu suku lokuqala lweGoogle I / O 2018 uthotho lwezinto ezintsha zibhengeziwe eziza kufikelela kungekudala kumncedisi wenkampani. Ngabo, inkampani inethemba lokuqhubela phambili ngokuthe chu kwintengiso yokhuphiswano lwabancedisi abakhaliphileyo. Zeziphi izinto ezintsha ezinikezelweyo?
1 Yenza iifowuni kuwe
2 Amazwi amatsha ama-6 kunye neelwimi ezintsha ezi-6
3 IiMaphu zikaGoogle kunye neMiboniso eSmart
4 Izixhobo ezi-5.000 ezahlukeneyo
5 Incoko yendalo
6 Iintshukumo ezininzi
7 Ukuhlaziywa kwesicelo
Yenza iifowuni kuwe
Enye yezinto zokuqala nezothusayo kuMncedisi kaGoogle ngumsebenzi wokufowuna. Kuba enkosi kubukrelekrele bokuzenzela, umncedisi uya kuba nakho ukwenza umnxeba ngokuzimeleyo. Yintoni eza kubiza ilizwi lokwenyani. Ke kunokuba luncedo ukubhukisha iivenkile neehotele.
Ukongeza, umncedisi uyakuqonda ukuba uthini omnye umntu ngalo lonke ixesha kwaye uza kulingisa ukubhukisha. Kufanele si sikuxelele umhla kunye nexesha esifuna ukubhukisha. Umncedisi uza kwenza okunye. Umsebenzi onomdla, nangona umiselwe ukuvelisa impikiswano.
Amazwi amatsha ama-6 kunye neelwimi ezintsha ezi-6
Njengaye nawuphi na umncedisi olungileyo, uGoogle naye uyazi ukuba kuya kufuneka anike amazwi ngakumbi. Ke lilonke amazwi amathandathu amatsha azisiwe kumncedisi. Nangona okwangoku ziya kufumaneka ngesiNgesi kuphela. Elinye lala mazwi lelomculi uJohn Legend, nangona elakhe lingazukufumaneka ngokusemthethweni de kuphele unyaka.
Uluhlu lweelwimi apho iZenzo zikhona nazo ziyandiswa. Le miyalelo ikuvumela ukuba wenze iintshukumo kunye nezinye izixhobo. Zezinye zamandla omncedisi, ngoku awandisiweyo ukuya kwiilwimi ezintsha ezintandathu. Phakathi kwabo sifumana iSpanish.
IiMaphu zikaGoogle kunye neMiboniso eSmart
Umncedisi kaGoogle uyaqhubeka nokwandiswa kwaye uya kufikelela kwiifomathi ezintsha, njengemiboniso efanelekileyo. Ukongeza, kweli hlobo linye kuya kubakho indibaniselwano ebalulekileyo. Kuba singasebenzisa iwizard kwi iimaphu zikagoogle, ukuze sikwazi ukuthetha nawe ukufumana ulwazi ngelixa siqhuba, sikubuza indlela okanye sithumele imiyalezo kunye nemiyalelo. Inqaku abasebenzisi ababekhangele phambili kulo.
Izixhobo ezi-5.000 ezahlukeneyo
Inani elibalulekileyo elibonisa inkqubela phambili enkulu eyenziwa ngumncedisi kwintengiso. Okwangoku ifunyenwe kwizixhobo ezingaphezu kwama-5.000 ezixhobo ezizizigidi ezingama-500 ezixhaswa yiwizard. Ikhathalogu enkulu kakhulu, eqhubeka nokwanda ngokuhamba kwexesha. Ke inkqubela yomncedisi ayiyi kuyeka nanini na.
Xa sifuna ukuba nencoko noMncedisi kaGoogle, kufuneka siphindaphinde "Hey Google" okanye "OK Google" kwimiyalelo. Into ebangela ukuba kungabikho ncoko ngokutyibilikayo kwaye inzima ukunxibelelana nomncedisi. Oku kuyakutshintsha kungekudala, njengoko kuya kuthiwa izakususwa. Ukukhetha ngale ndlela unxibelelwano lwendalo kunye nomncedisi.
Kwakhona, Iintsapho ziya kuba nomsebenzi omtsha apho zingacela khona izinto "nceda" kumncedisi. Ke ukuba ufuna ulwazi, ngokulula "nceda" uyakufumana impendulo kumncedisi enkosi ngayo. Kubonakala ngathi yenzelwe ukufundisa eyona incinci endlwini ukubuza izinto "nceda".
Sele sikuxelele ngaphambili malunga neZenzo kumncedisi, nangona uGoogle egqiba kwelokuba athathe izinto kancinci ngalo msebenzi mtsha. Enkosi kule nto intsha, Siza kuba nakho ukubuza umncedisi kaGoogle izinto ezininzi ngaxeshanye ngendlela elula kakhulu. Ke kwisivakalisi esinye siya kuba nakho ukukucela ukuba wenze izinto ezininzi. Oku kuyakuxhamla kwiincoko zendalo ezingakumbi.
Ayisiwo umsebenzi omtsha, nangona ikwayinto ebalulekileyo enomdla kuMncedisi kaGoogle. Kuba iya ku hlaziya uyilo lweapp yefowuni. Isinika uyilo olutsha, ubuncinci kunye nokulula. Ukusuka kwinto esinokubona ngayo ukuba ifuthe loYilo lwezixhobo liqhubeka ukuqhubela phambili kwizicelo zenkampani. Njengoko kucacile nomncedisi.
Okwangoku asinawo umhla wokukhutshwa kwezi ndaba ziya kufikelela kuMncedisi kaGoogle. Kungenzeka ukuba, baya kufika kulo lonke ihlobo. Kodwa asinawo umhla othile. Ke siya kugxila kwezinye iindaba malunga noku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Ukusetyenziswa kwe-Android » Zonke iindaba malunga noMncedisi kaGoogle zithiwe thaca kuGoogle I / O 2018